ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: ရယ်စရာမောစရာ ဟာသများ
ညချစ်သူ | 1:07 AM | ဟာသ
ညချစ်သူ | 1:07 AM |
နတ်သားကြီးကပြောတယ် "နောင်နှစ်ပေါင်း၁၀၀ပြည်.ရင်လျှော.ကျသွားမယ်တဲ." "ဟာဒါဆိုအဲ့အချိန်
ကျကျွန်တော်မရှိတော.ဖူးပေါ." "အေးမင်းမရှိပေမယ်.ငါရှိသေးတယ်က"ွ "နောက်တစ်ခုမေးမယ်အာဖရိက
"နောက်နှစ်ပေါင်း၁၀၀လောက်နေရင်လွတ်ပြီကွ" "ဟာအဲ.အချိန်ကျကျွန်တော်မရှိ တော့ဖူးပေါ့"
"အေးမင်းမရှိပေမယ့်ငါရှိသေးတယ်ကွ" "ဒါဆိုတစ်ခုပဲမေးမယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်နိုင်ငံက
အင်တာနက်လိုင်းတွေဘယ်တော.မှကောင်းမှာလည်း" နတ်သားခေါင်းကိုငုံ.ပြီးအားငယ်စွာနဲ.ပြော သည်
ပထမလူ............ဟာ ဟိုရှေ့မှာလူတယောက်ဆိုင်ကယ်မှောက်ပီး လဲနေတယ်ကွ....ကူညီရအောင်
“ ထောက်ခံစာ ”
ငပိုး သည် သင်္ချာအလွန်ညံ့သော ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သည် ဆရာ(မာမီ တေမင်း)က သင်္ချာစွမ်းရည်တိုးတက်လာစေရန်
ငပိုး ကိုပုစ္ဆာများဖိ၍ တွက်စေသည် ဂျွန်ကလေးကလည်း ပုစ္ဆာတွက်တိုင်း မှားမြဲမှားနေရာ...
ဆရာ... ။ “ ဟေ့ငပိုး ရေ... မင်းသင်္ချာတွက်တိုင်း မှားနေတယ်ကွာ ငါကမင်း အမှားတွေများ သင်နေလို့လားကွာ... ။ ”
ငပိုး ... ။ “ မဟုတ်ပါဘူးဆရာ ... ။ ”
ဆရာ... ။ “ ဒါဆိုရင် ဆရာဖြစ်ဖြစ် မင်းဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ယောက်တော့ ရူးနေလို့ဖြစ်မှာပါပဲကွာ... ။ ”
နောက်တစ်နေ့ရောက်သော် ငပိုး သည် တက်ကြွသောဟန်ဖြင့် ဆရာထံ စာရွက်တစ်ရွက်ယူလာလေသည်....
ဆရာ... ။ “ ဟေ... ငပိုး ဒါက ဘာစာရွက်ကြီးတုန်းဟ... ။”
ငပိုး ... ။ “ ကျွန်တော်မရူးကြောင်း ထောက်ခံစာပါဆရာ...။”
ဆရာ... ။ “ ဟေ....................။”
" ဒါဖြင့်ရင် ပွဲခင်းပရိသတ်ထဲမှာတုန်းက ဘာဖြစ်လို့အော်ဟစ်
အကူအညီ မတောင်းခဲ့တာလဲ "
" ကျွန်မနားကိုအသာကပ်ပြီး လက်ကုတ်ခေါ်သွားတုန်းက
ဒီလိုလုပ်လိမ့်မယ် မထင်ခဲ့မိလို့ပါရှင် "
အရောင်းစာရေးမ တစ်ဦး၊ စီမံရေးရာ စာရေး တစ်ဦး နှင့် မန်နေဂျာ တစ်ဦးတို့ နေ့လည်စာ
အတူထွက်စားကြသည်။ တစ်နေရာ အရောက်တွင် လွန်စွာအိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေပြီ
ဖြစ်သော ကြေးဝါမီးခွက် ကလေးတစ်လုံးကို တွေ့လေ၏။
သူတို့ ပွတ်တိုက်ကြည့်ကြ၏။ ထိုအခိုက် အတွင်းမှ မီးခွက်စောင့်နတ်သမီး
ဂျင်းနီ ထွက်လာလေသည်။ ဂျင်းနီက " သင်တို့ လိုရာကို ပြောလော့၊ ကျွန်ုပ်
ဖန်ဆင်းပေးမည် " ဟုပြောလေသည်။
ထိုအခါ စီမံရေးရာစာရေးက "ကျုပ်အရင်ပြောမယ်... ကျုပ်အရင်ပြောမယ်" ဟုဆိုကာ "
ကျွန်ုပ် ဖလော်ရီဒါနားက Bahamas ကျွန်း လေးကို သွားချင်တယ်။
Speed Boat စီးပြီး ဇိမ်ကျကျနေမယ်...ဘယ်သူ့မှဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူး..."။
ပြောပြီးပြီချင်း ဂျင်းနီက ခေါင်းတချက် ငြိမ့်လိုက်ရာ သူ မြင်ကွင်းမှ ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
နောက်..."ဒီတစ်ခါ... ငါ့အလှည့်" ... အရောင်းစာရေးမက အတင်း ၀င်ပြောသည်။
ငါ ဟာဝိုင်ယီကျွန်း ကို သွားမယ်။ ကမ်းခြေမှာ massage နှိပ်ပေးတဲ့သူ နဲ့ "Pina Coladas"
သီးစုံဖျော်ရည်လေး မြုံပြီး မှိန်းနေမယ်...။ သူမပြော ပြီးပြီး ချင်းဂျင်းနီက
ခေါင်းတစ်ချက်ငြိမ့်လိုက်သည်။ သူမ မြင်ကွင်းမှ ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
မန်နေဂျာက ခေါင်းတချက်ညိတ်လိုက်ပြီး "ဟို နှစ်ကောင်ကို ထမင်းစားပြီးချိန်မှာ
သူငယ်ချင်းအားလုံး တစ်နေ့ တာ အမောတွေ ဟာသလေးတွေ ဖတ်ပြီး
Posted by ညချစ်သူ at 1:07 AM